CAJIIB: Aroos ku burburay su’aal xisaabeed | Radio Iftin
CAJIIB: Aroos ku burburay su’aal xisaabeed
(Sunday, March 15, 2015)- Gabar aroosad oo u dhalatay waddanka India ayaa isaga dhaqaajisay xafladdii arooskeeda, kaddib markii ninkii guursanayey uu ku guuldarreysay inuu xaliyo su’aal xisaabeed aad u sahlan sida ay boolisku sheegeen Jimcihii.
Aroosadda ayaa ku imtixaantay ninka aroosi lahaa xirfaddiisa xisaabeed, markii uu si qaldan isugu darayna xisaabtii, waxay gabi ahaan isaga dhaqaajisay xafladdii arooska.
Su’aasha ay waydiisay aroosadda ninkii aroosayey ayaa waxa ahayd: ‘Waa imisa 15 + 6.
Waxa uu si qalad ah ugu jawaabay 17.
Dhacdadan ayaa dabayaaqadii Arbacadii ka dhacday xaafadda Rasoolabad ee ku dhow halka warshadaha leh ee Kanpur oo ku taalada waqooyiga magaalada Uttar Pradesh.
Sarkaalka Booliska ee xaafaddaas Rakesh Kumar ayaa sheegay in qoyska wiilka ay ku qalqaaliyeen gabadha inay ku soo laabato arooska, laakiin way diiday, waxayna sheegtay in wiilka aroosku uu been uga sheegay heerkiisa aqooneed.
“Qoyska wiilka way naga qariyeen aqoontiisa liidata” sidaa waxaa yiri aabaha gabadha ee lagu magacaabo Mohar Singh, wuxuuna intaa ku daray: “Xitaa qof dhigta fasalka koowaad wuu ka jawaabi karaa su’aal xisaabeedkan.”
Booliska ayaa kala dhex-dhexaadiyey qoysaska labada dhinac, iyadoo ay kala ceshteen dhammaad hadiyadihii iyo dahabkii la is dhaafsaday ka hor arooska sida uu sheegay sarkaal Rakesh Kumar.
Inta badan aroosyada dalka Hindiya waxaa soo qaban qaabiya reeraha arooska iyo aroosadda, marka laga reebo kulamada horudhaca ah, sidaa darteed way yar in lammaanayaashu ay si fiican isku bartaan ka hor arooskooda, waana midda ay gabadhani qoorta u suratay ninka jaahilka ah.
Bishii la soo dhaafay isla dalka Hindiya waxaa ka dhacay in aroosad kale ay guursatay nin marti ku ahaa xafladda arooskeeda, kaddib markii uu ninkii aroosi lahaa miir dabaalmay (suuxay), islamarkaana ay ka carootay in la la socodsiin waayey.
War hooy aqiste waa la diiday jaahil oo ma jiro meel uu ku roon yahay adduun iyo aakhiro ee wax iska baro.